World Chef Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ကမ္ဘာ့ဖလားစားဖိုမှူး
ကမ္ဘာ့ဖလားစားဖိုမှူး APK ကို
ကမ္ဘာ့ဖလားစားဖိုမှူး, သင့်စားသောက်ဆိုင်ဖန်တီး VIP ဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးသောချက်ပြုတ်နည်းများချက်ပြုတ်ဖို့ဂိမ်း Play ။ သီးသန့်ဟယ်လိုသာကန့်သတ်အချိန်များအတွက်ရရှိနိုင် feature! 🎃
သငျသညျထူးခြားဆန်းပြားအစားအစာကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား? သငျသညျလူတစ်ဦး၏တစ်ဦးဘာဂါနဲ့ fries ကြင်နာပိုမှန်သလော တစ်ခုခုကိုလမ်း, ကမ္ဘာ့စားဖိုမှူး, အများဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ပြုတ်ဂိမ်း၏မီးဖိုချောင်၌သင်တို့အဘို့အစက်အပြောက် 20 လူမျိုးပေါင်းစုံကျော်ထံမှစားဖိုမှူးများနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများအတူရှိပဲ!
, သင့်စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ပါကနာမည်တစ်ခုပေးနှင့်သင့်အရသာကအလှဆင်! ထိုအခါကမ္ဘာကအစားအစာများနှင့်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ဖောက်သည်ချက်ပြုတ် start! သင့်နေရာမကြာမီသင်ကပိုကြီးအောင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လူကြိုက်များဖြစ်လာလိမ့်မည်!
တိုင်းအသစ်ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစားဖိုမှူးနှင့်သင်၏ menu ကို Expand: Taco, ပီဇာ, ဆူရှီ ... တစျလောကလုံးတစျခုစားသောက်ဆိုင်အတွင်း၌ fit နိုငျပါသညျ! အောင်မြင်မှုလှေကား VIP ညစာစားပွဲများအတွက်ကြိုဆိုပင်အထူးဖြစ်ရပ်များသူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့ရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြမည်! သငျသညျမကြာမီထိပ်တန်းစားသောက်ဆိုင် running ၏အနုပညာကျွမ်းကျင်ပါလိမ့်မယ်။
ထိုအသတိရ! ဒါကအစာရှောင်ခြင်းအစာကိုပူးတွဲမဟုတျပါဘူး, သင့်ကိုအကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ-ချက်ပြုတ်နှေးကွေးရန်သင့်အခြိနျယူပါ။ သင့်ရဲ့ဖောက်သည်သူတို့ကစောင့်ဆိုင်းရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မည်ကိုငါသိ၏။
Create, အလှဆင်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒဏ်ငွေထမင်းစားခန်းစားသောက်ဆိုင်ကို run!
အဆိုပါဒီဇိုင်းစတူဒီယိုမှာသီးသန့်အလှဆင် Craft ။
Buy နှင့်ကုန်သွယ်မှုလတ်ဆတ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ပို. ပို. အရသာဟင်းလျာများချက်ပြုတ်။
ကိုယ့်ဟာကိုယ် dock ကို Build တစ်လှေရထူးခြားဆန်းပြားပါဝင်ပစ္စည်းများတင်သွင်း start!
ကမ္ဘာ့ဖလားစားဖိုမှူးကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အခမဲ့နှင့်ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံနှင့်အတူဂိမ်း In-app ကိုပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်ကို disable လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်, သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ရဲ့ Settings များအတွက် In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို turn off ပါ။
72.40 ကို MB
Cafeland - ကမ္ဘာ့ဖလားမီးဖိုချောင်
ဘာဂါဆိုင် - ...
Toca မီးဖိုချောင် 2